मनकामना लाई केन्द्रविन्दु बनाएर भर्खरै गयो यति ठूलाे भूकम्प ! - Info Nepal
INFONPLसमाचारमनकामना लाई केन्द्रविन्दु बनाएर भर्खरै गयो यति ठूलाे भूकम्प !
याे पनि, मुला खाएपछि भुलेर पनि खान नहुने यी चीज नत्र फेरि पछुताउनु पर्ला ! मुला प्राय हरेकको भान्सामा रहने तरकारी हो । कहिले सलादको रुपमा कहिले अचार त कहिले मुलाको परौठा र तरकारी समेत बनाएर खाने गरिन्छ ।
सुन्तला :- मुलासँग सुन्तलाको सेवन पनि हानिकार मानिन्छ । अनुशन्धाताहरूले सुन्तला र मुलाको मिश्रणबाट विष उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् । यी दुईबाट निस्कने तत्वले पेटसँग सम्बन्धीत मात्रै होइन शरीरका अन्य भागमा पनि गम्भीर असर पर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
करेला :- करेला र मुलालाई कहिल्यै पनि सँगै नखान चिकित्सक तथा अनुशन्धाताहरूको सुझाब छ । यी दुई फलफुलमा पाइने प्राकृतिक तत्वको रियाक्सनले मानव शरीरमा गम्भीर असर पार्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ । मुला र करेलासँगै सेवन गरेमा श्वासप्रश्वास र मुटुसम्बन्धी रोग बढ्ने अध्ययन रिर्पोटहरूमा उल्लेख छ ।